XFS oo sheegtay in lagu guuleystay in muddo ka badan hal sano aan dalka laga dhoofin wax dhuxul ah. – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By C/raxman maxamed Ibrahim / November 21, 2019 November 21, 2019
Muqdisho (SONNA)-Bayaan ka soo baxay wasaarada Xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa xukuumada federaalka Soomaaliya ayaa looga hadlay dadaalka ay dowladu galisay joojinta Jarida iyo dhoofinta dhuxusha.
Dhoofka dhuxusha waxa ay socotay illaa intii ka dambeysay Dowladdii dhexe ee Soomaaliya.
Cilmi baaris ay wada sameeyeen Wasaaradda Xannaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa iyo hayadaha UN ka oo ka caawiya dowladda
Waxa Sharaf ii ah inaan idinla wadaago waxqabad muhiim ah oo ay Wasaaradda Xannaanada Xoolaha ,Dhirta iyo Daaqa ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ku howlaneed muddo dheer kana guulgaartay.
Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya waxa ay ku guuleysatay in aan waddanka laga dhoofin dhuxul laga soo billaabo bishii Agoosto 2018, xilligaas oo laga joogo muddo ka badan sannad iyo saddex bilood, warbixintaas oo ay hay’adda UN Monitoring Group ku soo bandhigtay bishan Nofember Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayey ku ammaantay in xukuumadda